Carrier Ops sano 3 5 bilood ka hor #88
waxay qaadanaysay wakhti ay ku duulaan Tomcat
Carrier Ops sano 3 5 bilood ka hor #93
Tijaabi Dino F-35.
Carrier Ops sano 3 5 bilood ka hor #94
waxaad ku hadashaa taageeraha Die-Hard Tomcat, kaas oo si dhab ah u khatarta F-35. Wax kasta oo ay sameeyeen (iyo Taasi maaha wax ka soo horjeeda Dino maadaama uu haysto waxyaabo kale oo wanaagsan!). Ma jecelahay F-35 rl ama ciyaaraha lol
Carrier Ops sano 3 5 bilood ka hor #100
Waa hagaagaa waxaan u dhistaa Xarunta Gargaarka, iyada oo aaney jirin F-22 marna loola jeedo inay noqoto. Marka dadku ogaadaan in habka loo qabto hawlgalku waa ka duwan yahay dagaalyahanka legacy markaa waxa laga yaabaa in ay leeyihiin jacayl ka sii yar. F-15 si dhakhso ah u eeg qaabka F-22 (oo ay sabab u tahay tixgelin la'aanta), laakiin weli way ka liidataa dhinac kasta (marka laga reebo tirada). B-1A wuu ka dhakhso badan yahay B-1B, laakiin B wuxuu u fiican yahay si kale. Markaa mararka qaarkood waa inaad wax u bixisaa si aad u hesho qof kale.
Carrier Ops sano 3 5 bilood ka hor #103
Anigu waxaan ahay gabow gabo gabow ah waxaan ahay nin Tomcat ah ilaa maalinta aan dhimanayo. Haatan inta aan ka helayo inta badan Helos .... ugu fiican ee labada adduun ee ilmuhu (qurux yar oo loo tuuray si qiyaas fiican).
Si daacad ah ayaan waqti badan u joogin wax aan ahayn jumbos lol